ဆရာ အားနေဆက် ပြောတဲ့ ကျွန်တော်တို့တွေ အားလုံးက ဘုံ hallucination ဖြစ်နေကြတာ ဆိုတာကို ယုံတယ်။ သာမန် hallucination မှာ မရှိတဲ့အရာကို ရှိတယ်လို့ တစ်ယောက်က ထင်နေပေမဲ့ ကျန်တဲ့သူတွေက မထင်ဘူး။ ဘုံ hallucination မှာတော့ အားလုံးက လက်ခံတဲ့အခါ ဒီမရှိတဲ့ ကမ္ဘာကြီးကို ကျွန်တော်တို့ အားလုံး ဦးနှောက်ထဲမှာ hallucinate ဖြစ်နေတော့ ရှိသလို ဖြစ်နေတာ။ ဦးနှောက်က တချိန်လုံး story တွေ ဖန်တီးပြီး ဒီ ဇီဝစက်ရုပ်ကြီးကို ထိန်းကြောင်းပေးနေတာ။ တယောက်နဲ့ တယောက် story တွေက ဘုံဖြစ်လာတဲ့အခါ society ဆိုတာကြီး ပေါ်လာတာပဲ။ အဲဒီ society တွေမှာ ဘုံ norm တွေ ပေါ်လာပြီး တစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ story တွေကို ပြန်လွမ်းမိုးချုပ်ကိုင်ခံရတဲ့အခါ ခုန ဇီဝစက်ရုပ်ကြီးပေါ်ကို ပြန်ပြီး ဝန်ပိစေတာပဲ။ ဒါကို stress လို့ခေါ်တယ်။ ဥပမာလေးနဲ့ ပြောရရင် အလုပ်၊ လစာ၊ ပိုက်ဆံဆိုတာ တကယ်မရှိဘူး။ Social norm တွေက ဖန်တီးထားတဲ့အရာတွေ။ တကယ်တော့ ဒီခန္ဓာ ဇီဝစက်ရုပ်ကြီးက သူ့အတွက် energy ရှာဖွေဖို့ ဖန်တီးထားတဲ့ story တခုဟာ evolve ဖြစ်လာပြီး social norm တခုဖြစ်လာတဲ့အခါ မလိုအပ်ပဲ အလုပ်အတွက်
ရှေ့ဆက်လျှောက်ဖို့ကို ဘယ်ကနေ အင်အား ရမလဲ။ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ move on လုပ်ဖို့ အတော်ခက်ခဲနေတယ်။ ဆယ်စုနှစ် တစ်ခုစာ memory တွေကြောင့် လူက ပိတ်မိနေတယ်။ ရှေ့ဆက်လို့ မရတာနဲ့ပဲ လူက အတော်ကို တိုင်ပတ်သွားတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် “ သင်သွားလိုရာ သွားနိုင်ပြီ ” လို့ အော်ပြီး လွှတ်ပေးလိုက်ချင်တော့တယ်။ တချိန်တည်းမှာပဲ “ မင်းကိုငါလွှတ်လိုက်တယ်၊ ငါ လွတ်မြောက်ပါစေ ” ဆိုတဲ့ စကားကို နားလည်သွားတယ်။ သူ့ကို လွှတ်လိုက်မှ ကိုယ်က လွတ်မယ်။ စိတ်က ဘယ်လိုမှ မလွှတ်နိုင်ဖြစ်နေတာကျတော့ ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲ ဒီလထဲမှာ ရုပ်ရှင် ၂ ကား ကြည့်ဖြစ်တယ်။ ပထမကားက A Ghost Story နောက်တကားက Drive My Car ။ ဇာတ်ကား ၂ ကားလုံးက letting go ကို ပုံစံ မျိုးစုံနဲ့ ပြထားကြတာ။ A Ghost story ထဲမှာဆို letting go မလုပ်နိုင်တဲ့ အပြင် time loop ထဲပါ ရောက်သွားသေးတာ။ ဒါပေမယ့် ကျွတ်ချိန်တန်တဲ့အခါ ချက်ချင်းကို ကျွတ်သွားရော။ Drive My Car က တော့ အော်စကာဆု ရသွားတဲ့ စာရင်းထဲ ပါလို့ ကြည့်ဖြစ်လိုက်တာ။ နောက်ပြီးတော့ မူရာကာမီ ရဲ့ ဝတ္ထုကို ရိုက်ထားတယ် ဆိုတာ ကြောင့်ရ
By Htet Wai Aung - May 04, 2022
Laptop တလုံး ဝယ်ယူရတော့မယ်ဆို အဓိက စဉ်းစား ရမဲ့ အစိတ်အပိုင်း တွေ လိုအပ်ချက်တွေ ထဲကမှ အဓိက ဦးစားပေး စဉ်းစားရမှာက CPU ခေါ် Processor တွေပါပဲ ။ CPU Chip Maker တွေ Manufactures တွေ အများကြီးက Model တွေ ဘယ်လိုပဲထုတ်ထုတ် ကိုယ်တကယ်တမ်း အသုံးတဲ့မ​ယ့် CPU တွေကို ပဲ ရွေးချယ်ရမှာပါ ။ ပထမဆုံး Intel CPU ရဲ့ i series မျိုးဆက်တွေအကြောင်း အရင်ပြောပြမယ် ။ အခုဆို i series တွေရဲ့ မျိုးဆက်ဟာ 11th Gen အထိ ရောက်ရှိနေပါပြီ ။ i3,i5,i7 CPU တွေဟာ သူတို့ရဲ့ ညီကိုတွေဖြစ်တဲ့ Intel Celeron, Pentium တို့ထက် Performance ရော Costing ရော ပိုမို မြင့်မားသာလွန်ကြပါတယ်။ i series CPU တွေကို Generation ခွဲဖို့ဆိုရင် CPU ရဲ့နောက်က No. လေးတွေကိုကြည့်ပြီး အလွယ်တကူ ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ Eg. Intel@Core i3-360M ဆို 1st Gen(2009-11) Intel@Core i3-2*** ဆို 2nd Gen(2011-12) Intel@Core i3-3*** ဆို 3rd Gen(2012-13) Intel@Core i3-4*** ဆို 4th Gen(2013-14) Intel@Core i3-5*** ဆို 5th Gen(2014-15) Intel@Core i3-6*** ဆို 6th Gen(2015-16) Intel@Core i3-7*** ဆို 7th Gen(201